Omume nke chatbots na azụmahịa kọmputa | ECommerce ozi ọma
Gini mere eji eme nkata ndi oru kachasi ahia gi nwere ike inwe? Ka anyị bido na nkọwa ahụ: chatbot bụ sọftụwia nwere ike ịgwa ndị ahịa okwu, ma n'okwu ọnụ ma na ederede, na-e copomi omume mmadụ. Nke ahụ bụ, robot ga-ekwu okwu ma ọ bụ degara ndị ahịa ya akwụkwọ mgbe ha chọrọ ya iji dozie obi abụọ ha niile na-enweghị ndidi.
Onye ọrụ zuru oke! Siri nke gi naanị maka ahia gi. A na-ejikarị bọtịnụ nkata site na ngwa izipu ozi dịka Facebook Messenger, Skype, ma ọ bụ Telegram.
O doro anya na ngwa ọrụ ọrụ ndị ahịa na-akparịta ụka dị egwu na ezigbo ọrụ ndị ahịa bụ ihe na-ekpebi mgbe a bịara n'ịmepụta njikọ aka, iwulite ntụkwasị obi ndị ahịa, na ịhụ ahịa na-aga n'ihu. M nzọ na ị na-ama ama ọhụrụ gị online ụlọ ahịa na-arụ ọzọ na ndị ọzọ!
1 Uru na ọghọm dị na nkata maka e-commerce
2 Wayszọ ndị ọzọ ojiji
3 Akụkụ gbara ọchịchịrị nke nkata
4 Nwere ike ịchọta ụdị nkata dị iche iche ...
5 Gịnị bụ nkata?
7 Ihe kpatara Azụmaahịa Mkparịta ụka
8 Gbaa ndị ahịa gị ume ịkekọrịta data
9 Humanize akara gị
Uru na ọghọm dị na nkata maka e-commerce
Isi uru bụ na ahịa ndị ahịa gị dị maka awa 24 kwa ụbọchị, na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị maka e-azụmahịa gị. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga - enyere gị aka ịzụlite azụmaahịa gị. Ka anyị lee ha site ugbu a gaa n'ihu:
Uru niile nke iji chatbot maka azụmahịa gị
Sọftụwia a na - eweta ọtụtụ elebara anya na e-azụmaahịa gị: Mkparịta ụka akparịta ụka akpaghị aka nke ga - abụ ọrụ nke ezigbo onye ọrụ. Ọzọkwa, onye ọrụ ahụ ga-enwe ike ịda mbà mgbe o kwughachiri otu mkparịta ụka ahụ ugboro ugboro.
Ọ bara uru karịa iji akụ na ụba (mmadụ) rụọ ọrụ dị iche iche, ndị na-adịkarị obere na ndị dị mkpa maka azụmahịa gị.
Ndị ahịa gị niile, n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla n'ụwa, ga-arụ ọrụ ozugbo ma nye ha ozi nke mbụ. Kedu ka ha si ghara inwe afọ ojuju? Ọ dịghị ụzọ ka mma.
Ọbụna mgbe gị na ọtụtụ ndị ahịa na-emekọ ihe n'otu oge, nkata nkata adịghị emehie ihe. N'ezie, ọ na-anakọta ozi ndị ọzọ gbasara ndị ọrụ enwere ike iji maka ndụmọdụ n'ọdịnihu (ekele maka kuki ndị ahụ ama). Ihe ọzọ bụ na iwe anaghị ewe gị, ọbụlagodi mgbe ọ bịara n’ebe ndị ahịa ahụ kacha nwee obi ọjọọ.
Wayszọ ndị ọzọ ojiji
O doro anya na isi uru sitere na iji bot maka ọrụ ndị ahịa, ọ dị mma? Mana enwere ụzọ ndị ọzọ enwere ike iji ya mee ọtụtụ ihe na ya: Iji kwado ma soro usoro. Iji maa atụ, nke a bụ otu Dominoes si eme iwu na US.
Iji kwado ngwaahịa. Chee echiche ma ọrụ ụlọ ọrụ gị ọ bụla na-emeghachi omume nwere ike akpaghị aka. Gbalịa iji nkata chatbot na omume ndị ahụ iji hụ ma ọ bụ ihe ecommerce gị chọrọ.
Akụkụ gbara ọchịchịrị nke nkata
Ọ bụghị ihe niile na-egbu maramara bụ ọlaedo mgbe ị na-ekwu maka okwu a. Lee ụfọdụ ọghọm nke ngwa ọrụ a. Anyị anaghị ekwu maka ego (enwere ụfọdụ nyiwe chatbot na-enye atụmatụ n'efu, dịka Dialog Flow, Google's platform for creating chatbots).
Na mgbakwunye na ọnụahịa ahụ, ekwesịrị iburu n'uche na bot ọ bụla ga-ahazi ya n'ụzọ nkeonwe maka azụmaahịa ọ bụla, ma gha imelite ya. Nke a nwere ike ịpụta na-eweta ọzọ ọzụzụ na-eri (ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya onwe gị) ma ọ bụ iku ọzọ (ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka onye ọzọ na-emere gị ya).
Ọ bụrụ na chatbot enweghị azịza a haziri ahazi maka otu ajụjụ ma ọ bụ obi abụọ doro anya, ma ọ bụ enweghị ozi dị mkpa, ọ nwere ike ịrapara ma ọ bụ manye onye ọrụ imegharị ajụjụ ọtụtụ ugboro.
Ọ bụrụ na nke a emee ọtụtụ mgbe, ndị ahịa na-enwe nkụda mmụọ wee pụọ mgbe ha nwesịrị ahụmịhe onye ọrụ.
Ọ bụrụ na bot ị na-eji bụ mkparịta ụka na imeghe, ahụmịhe ahụ ga-akawanye mma mgbe ejiri ya ụfọdụ, mana ntinye ya siri ike karịa (ma dịkwa oke ọnụ).
Otu nkọwa zuru ezu gbasara nkwenye a na-eche na ọ dịghị adị n'ezie. Agbanyeghị na ị nwere ike iche na ndị ahịa anaghị enwe ntụsara ahụ ịgwa igwe okwu, data ahụ na-ekwu otu ọzọ.
Ihe omumu nke Ubisend duziri na nkata na 2017 weputara ihe ndia (ihe ijuanya). 1 n'ime ndị ahịa 5 dị njikere ịzụta ngwaahịa na ọrụ site na chatbot. 40% nke ndị ahịa abụghị naanị njikere ime nke a, kamakwa ịchọrọ ịnata ụfọdụ onyinye sitere na bot. N'elu nke ahụ, ma ọ bụrụ na ị ka nwere obi abụọ, dị ka Hubspot si kwuo:
71% nke ndị na-azụ ahịa na-eji nkata iji dozie nsogbu metụtara ịzụta. 56% choro izipu ozi karia ikpo ndi oru ndi ahia.
Ya mere, nkata bots abụghị naanị ihe bara uru na-enye nkọwa, kamakwa na-enye aka ịchụpụ ezigbo ahịa.
Nwere ike ịchọta ụdị nkata dị iche iche ...
Anyị kwesịrị ịlaghachi azụ iji ghọta etu esi kesaa nkata. Nzọụkwụ gara aga bụ bot, sọftụwia nwere ike ịrụ ọrụ na akpaghị aka. Ha anọwo gburugburu ruo ogologo oge, ọbụlagodi onye na-ere ahịa email nwere ike iwere ya dị ka bot. A chatbot bụ bot nke ahaziri iche iji gwa ndị ọrụ.
Kacha nkịtị bụ:
Mepee chatbot: dabere na ọgụgụ isi na-amụta site na mmekọrịta gị na ndị ọrụ.
Mkparịta ụka na-emechi emechi: nwere ike inwe mkparịta ụka na nzaghachi oge ma enweghị ike ịmụta site na mmekọrịta.
Ndị na-eduzi Chatbot - Ndị ọrụ enweghị ike ịzaghachi n'efu, kama ha ga-ahọrọ ma pịa ụfọdụ azịza akọwapụtara nke chatbot na-enye.
Mkparịta ụka Mkparịta ụka - Ndị ọrụ nwere ike pịnye ajụjụ ọ bụla wee zigara ya na chatbot, nke ga-azaghachi otu ihe ahụ nye onye dị adị.
Nhọrọ nke otu ma ọ bụ nke ọzọ dabere na ebumnuche na ndị na-ege ntị ga-eso chatbot. Enwekwara ike ijikọta ha ma jiri azịza emeghe na bọtịnụ akọwapụtara.
Nnukwu ewu ewu na mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta emeela ka ndị na-ege ntị nwee ike ịzụta site na nyiwe mmekọrịta. Nwere ike, ị nwere ike iwebata mkparịta ụka nkata na ahụmịhe dijitalụ gị dijitalụ? Ajụjụ ndị ahịa anyị na-ajụ anyị ugboro ugboro. Azịza anyị dị mkpirikpi bụ: EE!
Ọ bụrụ na ịmaghị nkata ndụ ma ọ bụ nkata, anyị edepụtara n'okpuru isi ozi ị kwesịrị ịma.
Gịnị bụ nkata?
Chatbots bụ ụdị teknụzụ "smart Assistant", dịka Siri ma ọ bụ Google Assistant. Kemgbe ụwa, ha lekwasịrị anya n'otu ọrụ dị n'ime nzukọ.
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ụdị nkata abụọ: nkata nkata na nkata ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi site na mmụta igwe na ọgụgụ isi (AI).
Site na AI na mmepe nke NLP (nhazi asụsụ), nkata na-aghọ ngwa ọrụ dị egwu nke na-eweghara mmekọrịta ndị ahịa yana isi mgbasa ozi dijitalụ. Naanị jụọ Google ma ị ga - ahụ ihe karịrị 100 nde nsonaazụ.
Ndị na-akparịta ụka nwere ike ịzaghachi ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ndị ọrụ weebụ n'otu oge. Ha na-akpaghị aka, na-enye nkwado 24/7, ma bụrụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa ịkwụ ụgwọ ndị ọrụ iji nyochaa ajụjụ. Oge mmeghachi omume bụ ozugbo, na mpaghara oge ọ bụla. Ha nwere ike ịkparịta ụka ruo ọtụtụ awa na-enweghị mkpa maka nlekọta mmadụ.
Agbanyeghị, chatbots bụkwa mmemme kọmputa. Ha dị mma naanị dị ka koodu kere ha. Ya mere, ndị nkata nkịtị anaghị enwe ike ịghọta okwu a na-edeghị ede ma ọ bụ zaa ajụjụ mmadụ ezughi oke. Ha agaghị enwe ike iche echiche n’èzí. Naanị ozi ha nwere bụ data nke ejikere tupu ha emee ya.
Nke a bụ ebe anwansi AI pụtara ịgbanwe mmekọrịta kọmputa, dịka anyị si mara ya. AI na-ekwusi okwu ike nwere ike ịghọta ihe ahịrịokwu pụtara, ọ bụghị naanị mkpụrụokwu ya. Ha na -amuta ihe site na okwu ndi edeghi okwu, okwu ha putara, na ihe omuma. Ha na-asụkwa ọtụtụ asụsụ. Na-akpali akpali!
Ihe kpatara Azụmaahịa Mkparịta ụka
Ihe dị iche iche gbasara bots chat bụ na enwere ike itinye ha na ndị ahịa na mmekọrịta azụmahịa dị iche iche, na ọkwa niile nke olulu. Dịka ọmụmaatụ, nke a na-eme ka ahụmịhe ndị ahịa kawanye mma, dịka ọmụmaatụ, n'ụzọ ndị a:
Kelee ndị ahịa nwere ike ịjụ ma ha nwere ajụjụ ọ bụla
Chetara ndị ahịa ị nwere ike ịnya ụgbọ ala gbahapụrụ agbahapụ
Soro ndi ahia tinye aka ma tinye oge
Nakọta data mbụ n’aka ndị ahịa nwere ike
Nyefee ọdịnaya na ngwaahịa ndị ahịa dabere na mmasị ha
Nye nkwado ngwa ngwa maka ndị ahịa 24 awa kwa ụbọchị
Gwa ndị ahịa banyere nkwalite na onyinye
Humanize akara gị (ee, nke ahụ bụ)
Ka anyị hụ n'ụzọ zuru ezu otu esi eme nke ọ bụla n'ime ha:
Ndị nkata na-ekele ndị ahịa gị na saịtị gị na-arụ ọtụtụ ọrụ dị mkpa nke nwere ike ime ka ahụmịhe ndị ahịa kawanye mma. Nke mbụ, ọ bụrụ na ndị ahịa na-alọghachite bụ ndị kpọbataralarị onwe ha na bot na-eleta saịtị ahụ, nkata chat nwere ike kelee ha aha ma nye ha ngwaahịa kachasị ọhụrụ nke nwere ike daba na ọdịmma ha. N'ihi ya, ndị ahịa gị ga-enwe ọ visitingụ na ịga na saịtị eCommerce gị karịa, nke ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ahịa na ego gị.
Nke abuo, ọ bu ihe di nkpa maka ichikota data mbu, udiri ihe di nkpa, ebe obu onye oru nyere ya ma nata ya ikike ha, karia izu ya nke oma ma obu nke ato.
Nke kachasị mkpa, ahụmịhe onye ọrụ nwere ike ịkọwapụta dabere na ebe ị gosipụtara. Mpaghara bu uzo ozo di irè iji bawanye ahia. Nnyocha nke Common Sense Advisory na-egosi na ndị mmadụ anaghị achọkarị ịzụta ihe n'asụsụ ndị ọzọ na-abụghị asụsụ ala nna ha. Ndị ahịa anaghị achọ imefu ego n’ihe ha ga-aghotachaghị. Ndị nkata nwere ike ịkparịta ụka n'asụsụ ndị ahịa na-edozi nsogbu a nke ọma.
Nye ndị ahịa gị nwayọ nwayọ ịzụta. Ndị mmadụ na-ahapụ ụgbọ ala ha oge niile, ọ bụ ihe dị njọ na nyiwe e-commerce niile. Agbanyeghị, saịtị ọ bụla kwesịrị ịgbalị ibelata ọnụego ndị ahịa ya na-etinye nzụta ha ma ọ bụ chefuo ha.
Dabere na otu akụkọ nke SaleCycle bipụtara na 2018, ụzọ atọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị hapụrụ ụgbọ ha n'ịntanetị. Mkparịta ụka nkata nwere ike inye aka belata ihe omume a.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ iji gwa ndị ahịa ha nwere ike ịre ahịa ha nwere ike chefuo iji mezue site na ịkpọtụrụ ha site na email. Otú ọ dị, nchọpụta na-egosi na chatbots nwere pịa-site na ọnụego (CTRs) nke dị okpukpu ise na iri karịa nke ahịa email.
Ndị na-akparịta ụka nwere ohere nke inwe olu enyi na mkparịta ụka, na-agwa ndị ahịa okwu na weebụsaịtị, ma na-enyere ha aka na nsogbu ha nwere ike ihu na mbụ nke gbochiri ha ịzụrụ na mbụ. Ihe ka mkpa - ha nwere ike ime ya n'oge ọ bụla n'ụbọchị, mgbe onye ahịa chọrọ iji weebụsaịtị gị.
Mgbe ụfọdụ ihe ndị ahịa na-achọ bụ obere ihe iji zụta ngwaahịa ha chọrọ - ihe dịka koodu mgbasa ozi ma ọ bụ coupon nke na-enye ha 5% kwụsịrị nzụta mbụ ha, ma ọ bụ ego nkwụsi ike 7%. Ndị na-akparịta ụka nkata nwere ike ime nke ahụ mgbe ndị ahịa na-eme nchọgharị na saịtị ahụ, na-enye ha nnukwu uru karịa ahịa email.
Gbaa ndị ahịa gị ume ịkekọrịta data
Ihe ndozi nke mbu na ari elu. Ọ bụ ụdị data kachasị dị mma na nke ụkpụrụ omume, ebe ọ bụ na onye ọrụ kwenyere ịnye ya. Chatbots bụ ụzọ dị mma iji kpalie ndị ahịa gị ịkekọrịta ihe ha chọrọ na nkọwa kọntaktị iji nyochaa ahụmịhe ahịa ha ka mma.
Nke a bụ ebe nkata nwere ike jikọta ya na ọtụtụ ọwa ndị ọzọ iji hụ na arụmọrụ kachasị maka ahịa ahịa gị. Dịka ọmụmaatụ, site na ịnakọta nọmba ekwentị nke ndị ahịa gị site na nkata, ị nwere ike itinye ha na ahịa ozi ederede ma nye ha onyinye pụrụ iche, kaadị onyinye SMS, Kupọns ekwentị, ọkwa ọkwa dị ka nkwenye nnyefe., Wdg.
Peoplefọdụ ndị nwere ike ọ gaghị adị jụụ ịkekọrịta ọnụọgụ ha, mana ha nwere nnukwu mmasị ịkekọrịta akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta ha, nke bụkwa ụzọ dị mma iji mee ka ndị ahịa gị nọrọ naanị na onyinye a na-enye ha. Nyere otu ndị mmadụ si eche banyere ozi Facebook Messenger ha, onye ọrụ a nwere ọnụego emeghe nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 250% karịa ihe email ahịa nwere inye, yana ọnụọgụ ọnụọgụ 620% dị elu.
Nyere ndị ahịa gị ozi ha ji kpọrọ ihe. Ntanetị nkata bụ ihe bara uru ma ọ bụrụ na ị na-anwa ịchọpụta nkeonwe dị ka ngwa ọrụ iji dọta ndị ahịa gị. Chatbots nwere ike inye ndị ahịa ha ọdịnaya dị mkpa nye ndị ahịa ha, dabere na data mbụ ha na-anakọta onwe ha.
Karịsịa ma ọ bụrụ na ikpo okwu ecommerce gị na-arụ ọrụ n'ime otu niche ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ndị ahịa gị
Na-enye ha nyocha mgbe niile banyere ngwaahịa kachasị ọhụrụ na niche a agaghị eme ka ha tinye aka na ika gị ma kwado ntụkwasị obi, mana ọ ga - emekwa ka ị bụrụ otu n'ime ndị isi echiche na ụlọ ọrụ ndị echiche ha dị mkpa.
Humanize akara gị
Bots nwere ike hiere ụzọ maka sọftụwia na-adịghị ndụ, mana bot abụghị naanị bot. Lọ ọrụ ndị jikọtara nkata na-aga nke ọma na mbọ ahịa ha agba mbọ hụ na obere igwe ha nwere agwa.
"Mgbe ị na-anwa iwepụta agwa bot, wepụta oge iji gosipụta ụdị agwa ya dị mkpa, dịka ụjọ ya, ọdịmma ya, wdg." O yitere nnọọ ka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ si agakwuru ndị ahịa ha. " '' - Jenna Bright, Ọkachamara Ọkachamara Ọdịnaya na Ọdee Akwụkwọ na Trust My Paper.
Mgbe ị kọwapụtara ụdị robot gị, ịchọrọ ịchọta ụda kwesịrị ekwesị na okwu maka robot. Nke a bụ imepụta ahụmịhe "mmadụ" karịa. Chọpụta ihe ndị ahịa gị nwere ike ịnụ ụtọ. The bot nwere ike ịnwe okwu ndịda, na-atụda "y'all" oge ụfọdụ na mmekọrịta ya na ndị ọrụ, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ ihe na-agbakwunyere Gen Z nke na-eji asụsụ oge a eme ihe maka ndị na-ege ya ntị.
Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ụzọ a ị ga-esi na-akparịta ụka gị ga-enye gị ohere ịme ka aha gị dị mma, na -emepụta mmekọrịta miri emi ma baa uru karị n'etiti saịtị ecommerce na ndị ahịa gị.
Ndị na-akparịta ụka nwere ike ịgbanwe ahụmahụ ecommerce nke ndị ahịa gị, ma ugbu a ọ dị gị n'aka itinye ha na mbọ ahịa gị. Ugbu a, ha bụ akụkụ dị mkpa maka azụmaahịa ọ bụla na-achọ imeziwanye na ịbawanye nsonaazụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Omume nke akparịta ụka na azụmahịa kọmputa
Nhazi m dijo
Ezigbo nkọwa, anọwo m na-agụ ma na-eme nyocha banyere nkata nkata ogologo oge, ọkachasị maka ecommerce, mana achọtara m ọkwa nke nkọwa dị na ndetu ahụ na-atọ ụtọ, n'ezie m ga-ekerịta ya na netwọkụ mmekọrịta m n'oge na-adịghị anya
Zaghachi na MyDesign